Semalt Experience: Quais Uais São As Tecnicas de Marketing Mais Eficientes
Miantsena ny zòma amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny famoahana ny vokatra SEO, toy ny PPC anus. Ny lehibe indrindra dia mifantoka amin'ny endriny toy ny famotsoran-keloka ho an'ny tsena. Tsy misy izany, tsy misy ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny kolikoly - hosting y dominio gratis ecuadorian. Tsy misy futuro, ny rafitra ara-toe-karena hafa dia mahomby, ary ny ampahany betsaka dia ny fiatoana. Andrew Dyhan, sepecialista da Semalt ,, dia hita fa ny fametrahana ny tetikasam-panjakana ihany no mahomby.
Ireo mpandraharaha dizitaly dia afaka mahita asa tena ilaina hanatanterahana izany mba hanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra. Maro ny vokatra azo avy amin'ny SEO mifanaraka amin'ny famoahana ireo fanentanana dokambarotra sy fanentanana. Ity fifandraisana ity dia noho ny fomba itondran'ny ankamaroan'ny dokam-barotra ny olombelona. Ny olona dia mifandray amin'ny marika, ka ny tanjona voalohany amin'ny fampirim-pandraharahana dia ny hampifandray ireo orinasa miaraka amin'ireo mpampiasa azy.
Ny adin-tsaina ara-pihetseham-po
Amin'ny lafiny hafa, ny tolotra SEO mahomby dia miankina amin'ny fahombiazan'ny fampidirana hafatra, fifandraisana ary zava-kanto. Izany fahafaha miditra izany rehefa mahatsapa ny fanekena ny hafatra ilay mpampiasa na maneho hevitra amin'ny fihomehezana amin'ny lahatsoratra voarainy.
Ny fomba iray mahomby amin'ny fiantraikany amin'io dingana io dia amin'ny fivarotana ara-pihetseham-po. Ity karazana marika ity dia mahatonga ny hafatra ho ao anatin'ny foiben'ny mpihaino anao, ka mamorona fahatsapana ny fananana marika. Ny dokam-barotra dia tsy maintsy misy amin'ny fomba izay tsy midika hoe ny fahatsapana ny fahatsapana ny mpampiasa..Ny ankamaroan'ny dokam-barotra dia mifandray amin'ny kaody misy anao amin'ny Internet toy ny tarika IAB. Ireo endrika ireo dia mety ho reraka haingana ary ny mpijery dia mamela ny masony hijery azy ireo.
Lahatsoratra manokana sy voatanisa marika
Teknika izay misy dokambarotra mivantana. Ity fomba ity dia mitaky ny fandefasana votoaty amin'ny mpampiasa amin'ny fomba iray izay endrika marika momba ny varotra. Vokatr'izany, mahita ny fifanakalozan-kevitra sy fampiharana mendrika ny mpampiasa azy. Ny fampahalalana izay mifindra avy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa dia manatsara ny fomba fiasan'ny motera fikarohana ho anao. Ity vokatra ity dia afaka manamboatra tranokala ho fanararaotana avy amin'ny tantaran'ny dokam-barotra. Ohatra, ireo orinasa toy ny Buzzfeed sy Quartz dia manana fifandraisana mahomby amin'ny orinasa mpanao dokambarotra hafa toy ny Catalog, Thought, Complex and Vice. Bilaogy iray avy amin'ny iray amin'ireo orinasa ireo dia manolotra fampisehoana an-tsarimihetsika ao anatin'ny fandrakofana ara-jeografikan'ny lasibatra.
Ankoatra izany, ny ankamaroan'ny mpivarotra dizitaly dia mampiasa teknolojia marobe iray, amin'ny sehatra maro samihafa. Ity fanatsarana ity dia ahafahana mijery ny fandrakofam-baovao amin'ny toerana manan-danja izay mety ho hitan'izy ireo. Amin'ny lafiny hafa, misy fomba maro ahafahan'ny olona mahita ny votoatiny na ny doka misy anao. Ny ankamaroan'ireo sehatra ireo dia ahitana ny Youtube, Pinterest, Vimeo ary Instagram. Ireo tranonkalan'ny haino aman-jery sosialy dia manana mpanindrahindra izay manosika ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka ary koa ireo tetik'ady SEO hafa.
Ny fampielezan-kevitra rehetra dia mikendry ny hahatratra olona sasany izay mahita ny maha-zava-dehibe ny votoatiny. Ao amin'ny marketing ara-nomerika, misy fomba maro, izay ampiasain'ny tompon-tranonkala mba hahitana ny fahitana an-tserasera an-tserasera. Ireo tanjona ireo dia mahatonga ny mpanjifa mandany fotoana vitsivitsy amin'ny votoaty hivadika ho mpanjifa iray. Ny orinasa mahomby dia mahafantatra ny mety ho an'ny fampiroboroboana lahatsoratra sy marika. Ity torolàlana ity dia manana famoronana, hafatra ary adi-hevitra momba ny dokambarotra izay afaka manatsara ny fanamarihana ny votoatinao. Ny adiresy dia mety midika hoe lanja mivantana ary koa ny fitomboana amin'ny vola miditra amin'ny varotra.